जसपा फुटको नजिक- तीन अध्यक्षका तीनखाले कुरा – ThePressNepal
जसपा फुटको नजिक- तीन अध्यक्षका तीनखाले कुरा
काठमाडौं चैत्र २४ । संसद अंकगणितमा निर्णक बनेको जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टीको बैठक बस्न नसकेको तथा नेताहरु पछिल्लो समय खुलेरै प्रस्तुती व्यक्त गर्न थालेपछि फुटका छिटाहरु देखिन थालेका हुन ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईले ओली सरकारसंगको सहकार्य संभव नभएको र ओलीलाई विस्थापनको विकल्प नभएको दावी गरिरहदाँ अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्दाँ अकर् अध्यक्ष महन्त ठाकुरले ओलीसंगको सहकार्य सवै भन्दै नजिक रहेको दावी गरेका छन् ।
यसरी अध्यक्षहरु विचको फरक – फरक अभिव्यक्ती र स्वास्थ केन्द्रित हुदाँ जसपा फुट नजिक पुगेको देखिन्छ । संविधान संसोधन, रेशम चौधरी, तथा लाल आयोगको संविधान संसोधनमाग राखेको जसपाका अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसंगको सहकार्य कुनै हालतमा संभव नभएको उपेन्द्र यादवको दावी छ । तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर ओलीले गृहकार्य बढाएको भन्दै उनीसंगको संभावना धेरै रहेको प्रष्ट पारेका छन् । उनको भनाई छ-‘हाम्रो माग पुरा गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले कदम उठाउनुभएको छ। कति दिन लाग्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। हाम्रा माग पुरा भए हामी प्रधानमन्त्रीकै गठबन्धनमा जाने धेरै सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘तपाईँले मेरो मुद्दा सम्बोधन गरेमा म तपाईको पासमा आउँछु। ओलीजीले गर्नुभएको छ। के गलत भएको छ।’
ओलीसंग दुई तिहाइ हुदाँ र दुई बुधे सहमति समेत गरेर सरकारका जादा आफ्ना माग पुरा नगराएका ओलीसंग अहिले केही आशा गर्ने ठाँउ नभएको भन्दै यादवले ओली दुई तिहाइबाई गुटको प्रधानमन्त्री बनेका सरकारलाई टिकाउन गाह्रो छ तेसैले संविधान संसोधन गर्ने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । तर ठाकुरले भने प्ररधानमन्त्री ओलीले मागका संवन्धमा छलफल अगि सकेको दावी गरे ‘हाम्रो माग सम्बोधन प्रक्रियामा छ। हामीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ताको लागि निर्देशिका बनाइएको छ। त्यो अनुसार काम भइरहेको छ। कति मुद्दा छन् हामी गृहमा पठाउँछौ।त्यसपछि सरकारबाट प्रकिया सुरू हुन्छ।’ उनको भनाई छ ।
यसरी दुई नेताहरु विच दुई धारको अभिव्क्ति सार्वजनीक हुदाँ अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले भने अव जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावी गरेका छन् । कांग्रेसले छलफल नै नगरी निर्णय गरेको र अव सरकारको दावी गर्ने पाली जसपाको भएको दावी गरेका छन् । उनको भनाई छ- ‘कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि हाम्रो पनि सरोकार आइहाल्यो, किनभने वैकल्पिक सरकार हाम्रो भूमिकाविना निर्माण हुन सक्दैन। त्यसको हकदार स्वतः हामी पनि भइहाल्यौं । त्यो दावा हाम्रो पनि रहन्छ नि, किनभने सहमतीय निर्णय त भएको छैन। कांग्रेसले एकल निर्णय गरेको छ। वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नका लागि हाम्रो सहयोग त चाहिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो दाबी हुनु स्वाभाविक हो।‘
यसरी अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु विच नै फरक फरक मत अभिव्क्ति सार्वजनीक हुन थालेपछि जसपा के होला भन्ने धेरैको प्रश्न छ । एमाले यथावत रहने र जसपा फुटेर पुर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि ओलीले विश्वासको मत लिन सक्ने भएका कारण ओलीले जसपासंगकव छलफललाई त्रिव्र बनाएको छ ।
Tags: उपेन्द्र यादव जसपा महन्त ठाकुर राजेन्द्र महत्तो
Previous पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेबिसंघको निगम घेराउ
Next प्रचण्डले के जोखाना हेर्या ? – प्रदिप गिरी